Yintoni i-Ethereum? -Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Yintoni i-Ethereum?
tag: I-EIP-1559, wayinyamekela, Ether, ethereum, Inethiwekhi ye-Ethereum
Yaziswa kwi-2015, inethiwekhi ye-Ethereum yenye blockchain owavula ukusetyenziswa kwezivumelwano ezifanelekileyo zokwakha izicelo ezinokucwangciswa, ngaphandle kwesidingo sokuthenjwa- ukungathembeki - kwaye ngaphandle kwemvume. Kule minyaka imbalwa idlulileyo Ethereum Yayiyinjini eyavelisa ukuzalwa kwentshukumo Defi (ezemali ezisasazekileyo), uqoqosho lwedijithali olutsha olwenziwa ngabalingane. Ukusukela ngehlobo lowe-2019 IDeFi kwi-Ethereum Ikhule ngaphezulu kwamaxesha ali-150, ukusuka kwi- $ 500 yezigidi ukuya kwi- $ 75 yezigidigidi kwii-asethi zizonke.
i iikontraka ezihlakaniphile, Iikhontrakthi ezikrelekrele ze-Ethereum zezona zinto zenza ukuba umbhekisi phambili abe nenkqubo: ezi zivumelwano zibukhali zikhokelele kuphuhliso lomtshangatshangiso omtsha wezicelo ezibanjelwe kwinethiwekhi ye-Ethereum, kubandakanya nokusetyenziswa kweDeFi.
I-Ethereum ifana nekhompyuter enkulu yehlabathi, njengeVenkile yeGoogle Play, okanye ivenkile yeApple iOS, nangona kunjalo. isemthethweni, ukumelana nokunyanzelwa, kwinethiwekhi nabani na angakha okanye asebenzise usetyenziso.
I-Ethereum inokucingelwa njengeleja yelizwe liphela, kuba wonke umntu angadlulisa ixabiso ledijithali ngelixa ehlala kwinethiwekhi enye. U-Ethereum kunjalo ngaphandle kwemvume, okuthetha ukuba ayifuni gunya lakhe nabani na ukuba enze transact. Into oyifunayo sisipaji se-Ethereum.
U-Ethereum kunjalo ukungathembekiOko kukuthi, ayifuni ukuthembana. Ingaba ithetha ntoni? Kuthetha ukuba ayifuni mntu ukuba athembele ekusebenziseni inethiwekhi. Siyayithemba ikhowudi ukuba ihambe, hayi abantu esirhweba nabo.
Ukusukela nge-Meyi ka-2021, i-Ethereum ilawula i-30,5 yezigidigidi ngexabiso ngosuku, ngaphezulu kweBitcoin nazo zonke ezinye iibhlokhi, ngaphezulu kweefintech giants ezinje ngePayPal ($ 2,5 yezigidigidi ngosuku.) E-Ethereum., Kukho indalo ekhula ngokukhawuleza ye Ukusetyenziswa kwemali koontanga, apho endaweni yemali yemveli, usetyenziso lweDeFi ngokwendalo lwedijithali, oluzenzekelayo ngesoftware eyakhelwe kwi-Ethereum, kwaye yeyabanikazi boluntu: enyanisweni abaphathi be-dapp token bavota kwizindululo kunye nohlaziyo lwexesha elizayo kwezi protocols.
I-Ethereum inethokheni yayo ye-ETH, esetyenziselwa ukuhlawula iifizi zerhasi, iikhomishini, ngexesha lokuthengiselana ngaphakathi kwenethiwekhi. U-Ethereum ujongeka ngathi uza kufika kwixabiso leBitcoin kungekudala… ukuba akade aligqithe.
Ngaba uyafuna ukuthenga i-Ethereum? Ndicebisa uBinance:
Thenga i-ETHEREUM KWIMALI
Yintoni i-Ether (ETH)
I-Ether (ETH) luphawu lwendalo lwenethiwekhi ye-Ethereum. I-ETH yinto ohlawula ngayo ukuhambisa kunye nokusebenzisa usetyenziso olwakhiwe kwinethiwekhi ye-Ethereum.
Ukuba ndiza kuboleka imali yam kwisicelo seDeFi esinceda ukubolekisa, kufuneka nje ndidibanise isipaji sam se-Ethereum kwaye ndihlawule umrhumo omncinci kwi-ETH ukuqala ukurhweba. Le rhafu ngoku iya kwi abasebenzi basezimayini, ukubakhuthaza ukuba baxhase imicimbi yenethiwekhi ye-Ethereum, ebhalwe ngokusisigxina kwi-blockchain.
Ehlotyeni lowama-2021, I-Ethereum iya kuphumeza uhlaziyo olubizwa ngokuba yi-EIP-1559 apho le rhafu ihlawulwe kwi-ETH iyatshiswa kwaye kulindeleke ukuba yehlise ukunyuka kwamaxabiso kwi-ETH ibe ngaphantsi kwe-1% ngonyaka.
I-ETH inamatyala amaninzi okusetyenziswa. Njengoko kucacisiwe kakuhle nguDavid Hoffman kwinqaku lakhe "U-Ether ngowona Mzekelo mhle weMali owakhe waBonwa liLizwe"U I-ETH yi "Impahla enamanqaku amathathuMsgstr "Ekunokusebenza njenge:
I-asethi ye-equity (okt, bopha i-ETH yakho kwaye ufumane i-ETH engaphezulu)
Into elungileyo eguqukayo / enokusetyenziswa (okt i-ETH isetyenzisiwe xa kusenziwa intengiselwano)
Ivenkile yexabiso (okt isiqinisekiso semali mboleko)
Ukuba uthenga okanye uthengisa i-ETH kwiDeFi okanye kutshintshiselwano nge-imali yedatha enje Binance, umqondiso kufuneka udweliswe njenge-ETH kuphela. Ukuba ngumnini wethokheni ye-ETH kuthetha ukuba nesiqwenga senethiwekhi, i-Ethereum, kunye noqoqosho lwayo lwedijithali olukhula ngokukhawuleza.
Inqaku langaphambiliYintoni iVolatility?
Inqaku elilandelayoYintoni i-Ethereum 2.0 kwaye kutheni ibaluleke kangaka